Wararka - Maxaa dhacaya haddii saliidda haydhka ee qaybta korantada ee korantada si aan habboonayn loo xushay
Dhamaanteen waan ognahay in unugga quwada korontada uu u dhigmo jirka bini'aadamka, saliida gaarka ah ee haydarooligga ee haydarooliga unugyada haydarooliga waxay u dhigantaa dhiiga aadanaha. Haddii dhibaato ka timaaddo dhiiga, waxay keeneysaa xaalado badan. Maanta Unugga Awoodda ee Huai'an wuxuu kuu sheegi doonaa waxa dhacaya haddii saliidda korantada ee qaybta korantada ee korontada si habboon loo xusho?
Sida dhiigga bini-aadamka oo kale, haddii dhiigu dhibaato leeyahay, markaa jirka bini'aadamku cillad buu ku dhacayaa, unugga tamarta ee haydaroolka saliidda ayaa ku sababi doona guul-darrooyin kala duwan nidaamka kontoroolka hawo-soo-saarka ee sheyga unugga korantada. Aan marka hore eegno kiisaska soo socda!
Nafaqada saliida haydhka ee qeybta korontada ku shaqeysa kuma jirto heerka saxda ah. Tusaale ahaan, nidaamka Haydarooliga ayaa loo baahan yahay in lagu isticmaalo iyadoo lagu jiro xaalad ah 20-70 darajo Celsius. Si kastaba ha noqotee, haddii VG46 saliid hidde ah oo leh qiyaasta viscosity ee 100 la doorto waqtigan, saliidu waxay ku jirtaa Isku-darka kinematic ee 20 darajo Celsius waa 1 34.6 cST.
Haddii nidaamka Haydarooliga ee qaybta tamarta korantada ay isticmaasho isku-xire xiriir-toos ah oo gaas-dareere ah, biyaha iyo glycol lama isticmaali karo.
Marka la barbardhigo saliidda macdanta, saliidda celiska 'synthetic refractory' waxay leedahay cufnaan sare. Saliida diidan ee biyaha ku jira kaliya ma leh cufnaan sare laakiin sidoo kale waxay leedahay uumiga sare, kaas oo soo saari doona iska caabin badan oo ku saabsan socodka saliidda, sidaa darteed si looga fogaado bamka keenaya cavitation iyo gariirka, Waa inaad iska ilaalisaa isticmaalka saliidahan oo kale.
Qalabka yar-yar ee Haydarooliga loo isticmaalo xaaladaha kuleylka waaweyn ee isbeddelaya, haddii isku-beddelka nafwaayaha uu yahay 3 jeer, baxsiga ayaa sidoo kale beddeli doona 3 jeer, taas oo saameyn weyn ku yeelan doonta nidaamka hawo-socodka yar.
Sidaa darteed, soosaaraha unugga korontada wuxuu xasuusinayaa qof walba in markaad dooranaysid saliida Haydarooliga - taxaddar inaad ku xulato hadba xaaladahaaga dhabta ah ee shaqada si looga hortago dhammaan noocyada waxyeellada nidaamka Haydarooliga.